“Doorashaddani Waa Xisaabtan,Adhiguna Shugux Shugux Kama Ilbaxo, Siyaasiyiintuna Xafladdo, Dhagax Dhig, Iyo Wax Qabad La’aan.”Jamaal Cali Xuseen | Somaliland Post
Home News “Doorashaddani Waa Xisaabtan,Adhiguna Shugux Shugux Kama Ilbaxo, Siyaasiyiintuna Xafladdo, Dhagax Dhig, Iyo...
“Doorashaddani Waa Xisaabtan,Adhiguna Shugux Shugux Kama Ilbaxo, Siyaasiyiintuna Xafladdo, Dhagax Dhig, Iyo Wax Qabad La’aan.”Jamaal Cali Xuseen
Hargeysa(SLpost)-Musharax xisbiga Ucid Jamaal Cali Xuseen ayaa ka hadlay doorashooyinka isla markaasna dhaliilo u jeediyay musharixiinta labada xisbi ee Waddani iyo Kulmiye, waxaanu shacabiga kula dardaarmay inay xisaabtan hordhigaan masuulka ay dooranayaan, waxaanu sidan ku sheegay qoraal dheer oo uu soo dhigay bogiisa Facebook, waxaanu u dhignaa qoraalku sidan “Waxaa aad ii soo jiitay kulan ay odoyaasha Gobolka Gabiley la yeesheen Gudoomiyaha Xisbigga talladda haya ee Kulmiye, isla markaana ah Murashaxa Xisbigga iyagoo la xisbaatamaya xisbigga Kulmiye. Odoyaasha Gobolka Gabiley ayaa laga hayaa; “ madaxweyne Daahir Riyaale waxaanu ku xasuusanaa inuu Gobol ka dhigay Gabiley. Fulintii arrinkaasi 6 sanadood oo Kulmiye dalka haystay kama hayno; haddaba intaan shan sanadood oo danbe laysla gaadhin; maxaanu 6 dii sanadood ee hore ugu qornaa buugga xisbigga Kulmiye? Xisaabtaasi waxa kale oo ay iyaduna haysataa xisbigga kale ee mucaaridka ah ee Waddani oo iyaguna 11 sanadood Baarlamaanka dalka looga taliyo kor fadhiyey. Waxay Gobolka Gabiley, iyo goboladda kale ee cusub ee Somaliland sida Baligubadle, ay is weydiinayaan tollow maxaa laydiin qabtay? Waxay su’aashaa mid la mid ah ay weydiin karaan Xisbigga Waddani; xeerkii goboladda dalka maxaa ku dhacay ileyn Baarlamaanka ayeey xukumayeene? Iskaba daaya xeerarka kaloo; Maxaaba ku dhacay xeerkii nimanka Baarlamaanka lagu dooranaayey ileyn weli waakan qabyadda ahe? Maxaase keenay iyadoo xeerarkaasi oo dhami inoo yaallaan in Baarlamaanku uu fasax ahaado 3dii bilood ee u danbeeyey 4 bilood oo ka mid ah? Maxaa hawsheenee dawladnimo ka dhigay fasax, dhagax dhig, xafladdo, iyo shahaado sharaf inago dadka ugu liidana oo dadkeenii noloshii ku sii adkaanayso oo canshuurtii xad-dhaaf tahay, qabyaaladiina inagu sii badanayso, musuq-maasuqii oo sii batay, oo ay weliba dadkeeniina ay bilaa shaqo yihiin.
Xisbigga talladda haya ee Kulmiye wuxuu shacabka Somaliland baray xafladdo tiro badan oo indho sarcaad ah oo maalinta ay qof, iyo dhowr qofba yidhaahdaan xisbigaanu taageersanahay in xaflad weyn loo sameeyo; waa dhoola tus siyaasadeed iyo dhaqan siyaasadeed uu inagu soo kordhiyey oo ay xisbiyadda kalena runtii ay kaga daydeen xisbigga Kulmiye. Kulmiye ayaa ugu xafladdo qurux badnaa; Kulmiye ayaa ugu dad badnaa dad yidhaahda xisbigga Kulmiye ayaanu ku biirnay. Maantana halka uu xisbiggaa Kulmiye dalkii marinaayo waa laga war hayaa. Haddaba miyeeynaan soo gaadhin xilligii aynu ka ilbixi lahayn siyaasiyiin danbe oo inagu manjaro habaabiya sidii uu Kulmiye sameyn jiray, iyo xafladdo indho-sarcaad ah. Adduunka miyaad aragteen siyaasiyiin xisbi ku soo biiraya oo xafladdo waaweeyn loo sameeynaayo? Somaliland waxay u baahan tahay in ay wax ka badasho habka qaldan ee indho sarcaadka ah ee ay siyaasiyiintu sameeyaan. Waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay shacabka Somaliland manta oo aynu dhamaan hoos u wada ognahay dareenka dhabta ah ee dalka ka jira. Siyaasiyiintu Khuuro kale ha la yimaadaan; doorkan dadku qof walba miisaanka ayeey saarayaan gaar ahaan dadka murashixiinta ah ee la dooranayo. Shacabkuna indhaha ha furan doorkan oo yaanay qabyaaladdu ina madax marin waa haddii aynu dalkan horumar iyo wax qabad rasmiya la rabno. Ilaahayoow dadkayga iyo dalkayga cid wanaag la rabta u door. Guul iyo Gobanimo.”